Warsaxaafadeed Xisbiga UDUB: Xisbiga Kulmiye Markii Ay ku Fashilmeen Inqilaabkii Qaawanaa Ee Lagu Af-gambiyayey Xukuumada…. « SAWNEWS NETWORK
« Maayarka Boorama Oo shalay Ka Warbixiyay Xaalado Amni Daro Ah Oo Ku Soo Koray Habeenadan Dambe Magaalada Boorama
Wasaarada Deegaanka Oo Shaaca ka qaaday In Tirada Daayeerka Goriilaha Ee Lagu Arkay Buuralayda Gobolka Saaxil Ka Badan Tahay Hal Xabo »
Warsaxaafadeed Xisbiga UDUB: Xisbiga Kulmiye Markii Ay ku Fashilmeen Inqilaabkii Qaawanaa Ee Lagu Af-gambiyayey Xukuumada….
Waayahan dambe waxaa soo if-baxaayey u jeedooyinka dhabta ah ee Xisbiga Mucaaridka ah ee KULMIYE, ka dib markii ay ku fashilmeen inqilaabkii qaawanaa ee lagu af-gambiyayey Xukuumada dalka ka talisa ee sharciga ah ee sida xalaasha ah ee distuuriga ah ku timid, isla markaana lagu qaybinayey la iskagana horkeenayey bulshadda Somaliland.
Xisbiga KULMIYE, wuxuu markaa u diga rogtay in Somaliland aduunweynaha ka siiyo sawiro fool-xun oo aan jirin oo ka been sheegaya xaaladaha dhabta ah ee dalku ku sugan yahay.
Waxaa nasiib darro ah in Xisbiga KULMIYE, hadh iyo habeen la soo taagan yahay in aan Somaliland la ictiraafin sida marar badan fagaarayaal wadanka gudihiisa iyo dibediisa-ba ka sheegeen Gudoomiyaha Xisbiga KULMIYE Md Axmed Maxamed Maxamuud Siilaayo iyo Xoghayihiisa Arimaha Dibeda Mr Maxamed Cabdilaahi iyo Xubno kale oo mihiima. Sida Maxamed Xaashi Cilmi iyo Rag kale.
Waxaa kale oo xusid mudan in Gudoomiyaha Xisbiga KULMIYE, uu weedho hanjabaad iyo digniin xambaarsan u jeediyey wadamada aynu jaarka nahay sida Ethiopia oo ah wadan ka kaliya ee safiir u joogo Somaliland iyo Jabuuti oo labada inaga dhexeeyaan daris wanaag, iskaashi doco badan taabanaya.
Waxaa kale oo marag ma doonto ah in Gudoomiyaha iyo madaxda kale ee Xisbiga KULMIYE in kiraan wixii u qabsoomay xukumada JSL iyo shicibkeeda oo isku duuban, sida guushii laga soo hooyay furniinkii dhoofinta xoolaha nool.
Hada-ba waxa la yaab leh in ragii goonida u sheegan jiray hal-gankii dib u xoreynta iyo gooni isu-taaga Somaliland, inay maanta ku heesayaan ama af-buuxa ku leeyihiin Somaliland uma qalanto, in la ictiraafo ama la siiyo aqoonsiga ay xaqa ugu leedahay caalamka, ictiraafkaasi oo ay wax badan oo la soo koobi karayn kaga xidhan yihiin umada reer Somaliland, oo ah rajada ugu weyn yar iyo weyn-ba la naawilayo.
Sidaa darteen wuxuu Xisbiga UDUB si adag u cabaaraynayaa weedhaha iyo erayada ka soo yeedhay madaxda Xisbiga KULMIYE iyo baran-bogaandaha lagu fidinayo website-ka uu gaarka u leeyahay Xisbiga KULMIYE ee loo yaqaano Somaliland.org iyo idaacadiisa Radio Horyaal, kuwaas oo si joogto ah u faafinaya, warar aan sal iyo raad toona lahayn oo lagu eedaynayo xukumada JSL, laguna mijo-xaabinayo qaranimada qiimaha weyn ugu fadhida shacabka Somaliland.
Waxaa is-waydiin leh sababta Xisbiga KULMIYE, sida xad-dhaafka ah uga gubanayo maqaalada Gudoomiyaha olalaha doorashada madaxtooyada ee Xisbiga UDUB Md. Cismaan Cabdilaahi Cigaal [Cismaan Hindi], kuna tilmaameen in xilka loogu dhiibay xajiimaynta xisbiga KULMIYE?
Hada-ba xaqiiqadu waxa ay tahay in Cismaan Hindi oo ah Sir-hudaari aanu wax af-lagaado ah u gaysan KULMIYE, balse odhaahdiisu waxaa ay sii kashifeen sirtii KULMIYE ee uu hore qaybo ka mid ah banaanka Gudoomiyihii hore ee xisbiga KULMIYE/UK. Kagana baxay xisbigaas, kaas oo ah xag-jirnimada siyaasadeed ee Xisbiga KULMIYE iyo amarada kaga yimid, hogaanka sare ee ahaa in uu faraha kala baxo dhammaan hawlaha ictiraaf raadinta JSL. Mudaharaadana ku abaabulo madaxda JSL ee soo booqda UK.
Ugu dambayntii waxaa Xisbiga UDUB xaal ka siinayaa dhalinyarada reer Somaliland, hadalada deel-qaafka ah iyo meel ka dhaca ee kaga yimid Gudoomiyaha Ololaha Doorashada madaxweynaha ee Gobolada Galbeed Baashe Cabdi Gaboobe iyo Gudoomiyihiisa Axmed Siilaayo oo labadu-ba ku tilmaameen dhalinyarada wadanka inay yihiin dhuuni raac, ka dib markii ay jawaab haboon u waayeen tus-baxoodii dhalinyaro si joogsi la’aana af-ka uga furay.
Libin iyo taranka naxa KULMIYE waxaa lagu soo ururin karaa maahmaahda somalida ee tidhaahda “Baqali wax ma dhasho, cid wax dhashana ma jecla”. waxaa kale is-dufaaca xad-dhaafka ah iyo muranka KULMIYE ka turjumaysaa maahmaahda kale ee ah dhagar-qabe dhulkaa u dhaq-dhaqaaqa.
Xoghayaha Guud ee Xisbiga UDUB
This entry was posted on December 14, 2009 at 3:46 pm	and is filed under News (Warka).